people Nepal » आजका पत्रिकामा आजका पत्रिकामा – people Nepal
१५ फागुन, काठमाडौं । आज काठमाडौंबाट प्रकाशित दैनिक पत्रिकाहरुले आगामी बैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको चुनावमा मतदाता बढेसँगै देखिएको उत्साह तथा प्रमुख पार्टी नेपाली कांग्रेेसभित्रै देखिएको किचलोको समाचारलाई फ्रन्टपेजमा छापेका छन् ।
आजको कान्तिपुर दैनिकले मतदाता १ करोड ४० लाख शीर्षकमा स्थानीय निर्वाचनको समाचारलाई प्रमुख बनाएको छ । त्यस्तै देउवालाई पौडेलको पत्र भनेर पनि समाचार फ्रन्टपेजमै छापेको छ ।
देउवाबाट अब पार्टी चल्दैन :
काठमाडौं – पार्टी सञ्चालन अपादरर्शी भएको भन्दै कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन सभापति शेरबहादुर देउवासँग लिखित माग गरेको छ । राजदूत नियुक्ति, भ्रातृसंस्था सञ्चालन, स्थानीय चुनावका लागि पार्टी परिचालनसम्मका काममा सभापति देउवाले एकलौटी गरेको भन्दै छिटो बैठक बोलाएर छलफल गर्न पौडेल पक्षले माग गरेको खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।
राष्ट्रिय परिस्थितिमा कांग्रेसले नेतृत्व गर्न आवश्यक भए पनि सभापतिको शैली र सक्रियता त्यस्तो नदेखिएको भन्दै पौडेल पक्षले पार्टी नेतृत्व सुस्ताएको निष्कर्ष निकालेको छ । सभापतिले पार्टीलाई एकढिक्का बनाउनुको सट्टा आफैंले गुटगत राजनीतिलाई बल दिएको भन्दै पौडेल पक्ष तीव्र असन्तुष्ट बन्न पुगेको छ ।
बैठकमा स्ववियु चुनाव गराउने विषयमा सभापति देउवा पक्ष नै अनुदार रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ । ‘स्ववियुको नोमिनेसन हुने दिनसम्म पनि तालाबन्दी भइरह्यो । सभापति पक्षधर नेविसंघका सभापति तालाबन्दी गर्नुपर्छ भन्दै हिँडेका छन्,’ छलफलमा सहभागी एक नेताले भने, ‘यस्तो हुँदा एमालेको आरोपलाई बल पुर्‍याउने ठाउँ पार्टीभित्रैबाट दिएका छौं ।’
देउवाबाट पार्टी चल्दैन : रामचन्द्र पौडेल
पार्टीलाई सक्रिय बनाऔं : डा. रामशरण महत
सभापतिले पार्टी डुबाउन लागे : बलबहादुर केसी
नेता पौडेलले देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवामार्फत ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । पत्रमा पार्टी संगठन, भ्रातृसंस्था सन्तुलित रूपमा चलाउनुपर्ने, राजनीतिक परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै तीन तहको चुनावको विषयमा पार्टी परिचालन र सरकार सञ्चालनमा खेल्नुपर्ने भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन माग गरिएको छ । त्यसका लागि अविलम्ब केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दलको बैठक बोलाउनुपर्ने माग गरिएको छ । बैठकमा नेता डा. रामशरण महत आक्रामक ढंगले प्रस्तुत भएका थिए । तर, उनैको प्रस्तावअनुसार ‘भित्र बोल्ने कुरा एउटा हुन्छ, तर बाहिर लाने कुरा अर्को हुन्छ’ भन्दै पत्रमा नरम व्यहोरा उल्लेख गरिएको छलफलमा सहभागी एक नेताले बताए ।
त्यस्तै नागरिक दैनिक, नयाँ पत्रिका लगायतले पनि सोही ब्यहोराको समाचार फ्रन्टपेजमा छापेको छ । नयाँ पत्रिकाले सरकारले संशोधन पुरक प्रस्ताव लैजाने तयारी गरिरहेको समाचार फ्रन्टपेजमा छापेको छ ।
आजको अन्नपूर्ण पोस्टले भने कर्मचारी सञ्चयकोषको अवधारणा, ३ सय मेघावाटको प्रस्ताव भनेर फरक समाचारलाई फ्रन्टपेजमा छापेको छ । चीनले पहिलो पटक नेपालीलाई गि्रनकार्ड दिएको समाचारलाई पनि अन्नपूर्णले छापेको छ ।